Global Voices teny Malagasy » Lahatsarim-Panomezam-Bahana Ny Vehivavy Sy Ny Fifandeferana Ao Indonezia An-Tsary · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Febroary 2016 8:49 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsinanana, Indonezia, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Fifidianana, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora, Vehivavy sy Miralenta
Misy fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana (ONG) iray namokatra lahatsarim-panoritsoritan-tsary haingana  maromaro manandra-teny hamahana fifandirana na olana amin'ny alalan'ny hetsika na asa milamina ao Indonezia.
Ny NGO Search for Common Ground [Mikaroka ny Marimaritra Iraisana] dia nampiasa  lahatsary maromaro ao anatin'ny fanentanana ara-panabeazana hampiroboroboana ny fanomezan-tsehatra ny vehivavy, ny fandeferana ary ny fisorohana ny eksitiremisma ao amin'ny fiarahamonina Indoneziana.
Ny lahatsary roa miresaka ny fandraisana anjaran'ny vehivavy eo amin'ny fitantanam-pitondrana dia mikendry  “hanova ny fihetsika sy ny fiheveran'ny olona amin'ny anjara toeran'ny vehivavy ao amin'ny demaokrasia, ao amin'ny fitantanam-pitondrana ary ao amin'ny fitarihana.” Latsaky ny 20 isanjaton'ny mpitarika voafidy ao Indonezia no vehivavy.
Ity lahatsary ity dia manasongadina  ny fametrahana an-jorony ny vehivavy ao Indonezia sy ny tokony ifidianana vehivavy mpitarika mba hanesorana ireo lalàna manavakavaka:
Ity lahatsary  ity manainga ny vehivavy hanao politika:
Namoaka  lahatsary roa miresaka fifandeferana sy eksitiremisma ihany koa ny vondrona.
Indonezia no manana mponina miozolomana be indrindra eto ambonin'ny tany. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izao, dia mihamaro ny fifandonana eo amin'ny kristiana sy ny miozolomana ary izany dia manasongadina  fa ilaina ny mampiroborobo ny fifandeferana. Ity lahatsary ity dia miezaka ny hamaha izany olana izany :
Lahatsary hafa indray manakivy ny tanora hianjera ao amin'ny sahan'ny fampianarana sy fihetsika ekstiremista :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/02/07/79079/
 lahatsarim-panoritsoritan-tsary haingana: https://www.sfcg.org/speed-drawing/ s
 olana izany: https://www.youtube.com/watch?v=PLZlLt4RSus